राष्ट्रपति बाइडेनको कार्यकारी आदेशले रोजगारी बढाउला? – Everest Times News
राष्ट्रपति बाइडेनको कार्यकारी आदेशले रोजगारी बढाउला?
२०७७ फाल्गुन १३, बिहीबार २१:४७
न्युयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी आपूर्ति प्रणालीलाई सुदृढ गरी उत्पादन उद्योग (म्यानुफ्याक्चरिङ) मा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले एक कार्यकारी आदेशमा बुधबार हस्ताक्षर गरेका छन् ।
राष्ट्रपति बाइडेनले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुअघि विपक्षी रिपब्लीकन र सत्तारुढ डेमोक्रेट पार्टीका सांसदहरुसँग परामर्श गरी सहमति गर्नु भएको थियो । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष अति महत्वपूर्ण खनिजको अमेरिकामै उत्पादन बढाउन एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
बाइडेनले देशका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएका क्षेत्रलाई देशभित्र बढावा दिन रिपब्लीकन र डमोक्रेट दुबै पार्टी सहमत रहेको बताए । आफू राष्ट्रपति भएयताका पाँच हप्ताको अवधिमा यो निकै महत्वपूर्ण सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न पाएकामा आफू निकै खुशी रहेको पनि बाइडेनले बताए ।
टेक्सासबाट प्रतिनिधित्व गर्र्ने रिपब्लीकन सिनेटर जोन कर्निनले राष्ट्रपतिसँग आफूले यस विषयमा वार्ता गरेको र राष्ट्रपति बाइडेन निकै प्रभावित भएको बताए । उनले बाइडेनले राष्ट्रिय मुद्दामा सॅगै काम गर्ने बताएको उल्लेख गरे ।